Vonoan’ olona tany Brickaville: tovolahy tsy ampy taona voaheloka roa taona an-tranomaizina | NewsMada
Vonoan’ olona tany Brickaville: tovolahy tsy ampy taona voaheloka roa taona an-tranomaizina
Hentitra ny fitsarana na nisy karazana famindram-po ihany aza, tamin’ny didy navoakany ho an’ity tovolahikely voampanga ho namono olona. Voaheloka roa taona an-tranomaizina sazy mihatra izy io.
Tovolahy vao 16 taona monja no voaheloka roa taona an-tranomaizina noho ny vonoan’olona. I Leocady Resie André, antsoina hoe Babasa, sy Rafanomezantsoa Noelson, antsoina hoe Noely, Dimilahy Roger Félix ,antsoina hoe Lava, ary laro Sampilahy Bruno ireo voampanga. Ireto roa farany izay 15 taona tamin’ny nitrangan’ny olana ary 16 taona izy amin’ izao fotoam-pitsarana, ny 25 jolay lasa teo izao. Raha iverenana ity raharaha nahavoasaringotra tovolahy kely vao 16 taona , vonoan’ olona niseho tao amin’ny kaominina ambanivohitra Lohariandava, distrikan’ i Brickaville ny 14 septambra 2016. Maty tamin’ izany i Jean Marc, izay evanjelista amin’ny finoana iray avy amin’ ireo sekta ao an-toerana.
Raha ny fanazavana sy ny fifandaharana teo amin’ny voampanga sy ny mpiaro voampanga ary ny mpitsara mpamoaka didy, andaniny, ny fampanoavana ambony, resaka ady vehivavy ny raharaha. “Tany amin’ny trano fandihizana iray ao an-tanana izahay ary nisy vehivavy iray lazain’ingahy evajelista fa sakaizany izay niresaka tamiko ka tezitra izy. Nivoaka ny trano fandihizana aho, nanaraka ahy avy tao aoriana anefa ilay evanjelistra ary nitondra vy teny an-tanany, namely ahy izy, saingy tsy nahavoa, ary azoko ny vy teny an-tanany ary naveriko taminy ka nahafaty azy”, hoy ny fiarovantenan’i Dimilahy Roger Felix, 16 taona, tamin’ny fotoam-pitsarana azy. Ity farany izay nilaza ihany koa fa tsy misy idiran’ ireo voampanga miaraka aminy ny raharaha fa adin’ izy sy ilay evanjelistra ihany.
Vokany, taorian’ny fandinihan’ny mpitsara mpamoaka didy sy mpanampy azy, nilatsaka ny didy misy fampihenan-tsazy noho izy tsy ampy taona ary ny tsy fandavany fa niaiky ny heloka vitany izy. Teo ihany koa ny hoe fiarovan-tena nataony saika novonoin’ ilay evanjelistra ka roa taona an-tranomaizina azon’ ity tovolahy tsy ampy taona ity. Marihina fa efa notanana am-ponja vonjimaika izy talohan’izao ary efa manala ny ambiny nitanana azy am-ponja sisa.